အကောင်းဆုံး လက်ဖက်ရည်သစ်ပင်ပါးစပ်ဟင်း ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး လက်ဖက်ရည်သစ်ပင်ပါးစပ်ဟင်း ကိုရှာဖွေရန်။
NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. တွင်တည်ထောင်ထားခဲ့ပါတယ် Taiwan။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် OEM ၏အထူးပြု လက်ဖက်ရည်သစ်ပင်ပါးစပ်ဟင်း။ ဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းများအားကောင်းတဲ့ functions တွေအရည်အသွေးမြင့်မား, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးနောက်-ရောင်းချခြင်းန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များဖောက်သည်များနှင့်အတူထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုတွေ့ကြပြီ။
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဘို့နှင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အထက် ကျော်လွန်. သွားအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဖော်ရွေသောဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။
ပုံစံ - 6-3
လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်ယူမှုသည်ပါးစပ်အတွင်းရှိအနံ့များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးအသက်ရှုလတ်ဆတ်။ သာယာကြည်နူးစေသည်.၎င်းကိုရေနှင့်ရော။ မသုံးစွဲဘဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်.
သင့်လျော်သောပမာဏကို 15 ယူပါ-20ml mouthwash,သင်၏နှုတ်၌ထားလော့,20 လောက်အဘို့အတံတွေးထွေး-စက္ကန့် ၃၀.
သင့်လျော်သောနူးညံ့သောအကျင့်နှင့်အတူ,သွားကုထုံးကိုလျှော့ချပြီး periodontal ရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/tea-tree-mouthwash.html
အကောင်းဆုံး လက်ဖက်ရည်သစ်ပင်ပါးစပ်ဟင်း ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် လက်ဖက်ရည်သစ်ပင်ပါးစပ်ဟင်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ လက်ဖက်ရည်သစ်ပင်ပါးစပ်ဟင်း ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
VSK တဆေးရွှေမျက်နှာဖုံး ထူးခြားသောနည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်,ကော်လာဂျင်၏အသားအရေကိုအလွယ်တကူစိုစွတ်စေရန်အဖိုးတန်ရွှေသတ္တုပါးနှင့်ခိုင်မာသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်ပေါင်းခြင်း,မျက်နှာဖုံးတစ်ခုစာရွက်အပေါငျးတို့သအနှစ်သာရ condenses!အသားအရေအပြည့်အဝအာဟာရများကိုစုပ်ယူပါစေ,ချောမွေ့အောင်မြင်,အတိမ်,Whitening နှင့်သက်ရောက်မှုခိုင်မာစေ.Maintenance အာရုံစူးစိုက်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း,မျက်နှာ၏အရေပြားအပူရှိန်သည်ရွှေမျက်နှာဖုံးတွင်အနှစ်သာရကိုထုတ်လွှတ်ရန်နှင့်စုပ်ယူရန်အားပေးသည်.ရွှေမျက်နှာဖုံးသည်တဖြည်းဖြည်းပါးလာသည်မှာထင်ရှားသည်.၎င်းသည်မျက်နှာဖုံးဖြစ်ပြီးအရေပြားကိုအပြည့်အ ၀ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်.ကို Maintenance အကြံပေးချက်များ မျက်နှာသန့်စင်ပြီးနောက်,မျက်နှာဖုံးကိုအသားအရေနှင့်အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်စေပါ.45 ပြီးနောက်-မိနစ် ၆၀,အရေပြားခိုင်မာတဲ့ခံစားရသောအခါ,မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားပြီးညင်သာစွာကျန်ရှိနေသေးသောအနှစ်သာရကိုစုပ်ယူ. လျှောက်လွှာပြီးနောက်,150c ယူပါ.ဂ(တစ်ခါသုံးခွက်တစ်ခွက်လောက်)96 ဒီဂရီအထက်ရေပူ၏,ပျော်ဝင်သွားစေရန်ရွှေမျက်နှာဖုံးကို ထား၍ အအေးခံပါ,၎င်းကိုခန္ဓာကိုယ်အနှစ်သာရအဖြစ်သုံးပါသို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်အတွက်ရေချိုးကန်ထဲသို့ထည့်ပါ. စွမ်းရည်:၇ ပိုင်း/သတျတောမူလ:ထိုင်ဝမ်
Tea Tree Mouthwash	| Bain De Bouche Tea Tree	| Teebaum Mundwasser	| Жидкость Для Полоскания Рта с Чайным Деревом	| Enxaguatório Bucal Da Árvore Do Chá	| Collutorio Alla Melaleuca	| टी ट्री माउथवॉश	| Enjuague Bucal Arbol De Te	| Tea Tree mondwater	| غسول الفم من شجرة الشاي	| Nước súc miệng cây trà	| น้ำยาบ้วนปากทีทรี	| Obat Kumur Pohon Teh	| চা গাছের মাউথওয়াশ	| Çay Ağacı Gargara	| 茶樹漱口水